“We didn’t start this to save the environment,” Tarun Mehta confides of the electric scooter company he cofounded in 2013 with college pal Swapnil Jain, Ather Energy. But if challenging the country’s gas-guzzling vehicles helps clear the air, so be it. “The right way to actually do that is to cre...ဆက်ဖတ်ရန် »
“We are very pleased that our long-standing partner BAIC is nowalong-term investor in Daimler,” said Ola Kaellenius, chief executive officer (CEO) of Daimler. Based on the current market capitalization of Daimler, BAIC has invested approximately 2.6 billion euros (2.9 billion U.S. ...ဆက်ဖတ်ရန် »
An “NBA Section” will be launched across Alibaba’s platforms. Leveraging Alibaba’s technology and consumer insight, this will allow fans in China to enjoy personalized and engaging content, in addition to shopping for NBA merchandise. NBA game highlights, original progra...ဆက်ဖတ်ရန် »
ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်တိုးပွားလာ၏အခြားသောနိမိတ်လက္ခဏာခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတရုတ်နိုင်ငံသို့တရုတ်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းနှင့်အပိုငျးအများ၏ 361 အပိုင်းပိုင်း၏ပြန်ပို့ကြေညာခဲ့သည်။
အချိန် post: မတ်လ-02-2019
နှစ်နိုင်ငံအကြီးတန်းအရာရှိများ Indianapolis အတွက် Eiteljorg ပြတိုက်, ရှေးဟောင်းပစ္စည်းနှင့်အပိုငျးအ 20 ကိုအပိုင်းပိုင်းအချို့ကို 100 ဧည့်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်, display ကိုအပေါ်ခဲ့ကြသည်ရှိရာ Indiana ပြည်နယ်၏အမေရိကန်ပြည်နယ်၏မြို့တော်အတွင်းကျင်းပဖြစ်ရပ်တစ်ခုမှာပြန်ပို့ကျင်းပခဲ့သည်။ အဆိုပါပြန်ပို့တရုတ် t ကိုပြန်လည်ဆောင်ကြဉ်းပါလိမ့်မယ် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
Post ကိုအချိန်: ဖေဖော်ဝါရီ-18-2019
Ningbo Hongxiang Mold team had started work from 15th, hope everyone hadawonderful CNY holiday! ဆက်ဖတ်ရန် »
ပြီးစီးခဲ့အပူစုပ်2အခေါင်းပေါက် D2 မှို T0 ရုံးတင်စစ်ဆေး !!
အချိန် post: ဇန်နဝါရီ-15-2019